MACLUUMAADKA TREEDJAK DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Treedjak Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Fido buuxda Tornjak
Eyga reer Croatia Planinac
Eyga Buugga Croatian
Tornjak waa eey weyn oo xoog badan, oo si saami ah loo saadaaliyay isla markaana dhaqaaqaya. Qaabka jirku waa ku dhowaad laba jibbaaran. Laftu ma fududa, laakiin hase yeeshee ma cusla, mana adka. Koodhkiisu wuu dheer yahay oo qaro weyn yahay. Jirka eeygan waa mid xoog badan oo si wanaagsan loo dhisay, oo leh dhaqdhaqaaqyo iswaafajsan oo sharaf leh. Timaha ayaa dhaadheer oo dhumuc leh isla markaana si ku filan jidhka uga ilaaliya xaaladaha cimilada xun. Dabada ayaa xiirtay, oo kor loo taagay sida calanka oo kale. Tornjak waxay leedahay muuqaal cad, isku kalsoon, dhab ah oo deggan. Guud ahaan, Tornjak waa eey dahaadhkiisu dheer yahay oo timo gaaban wejiga iyo lugaha ku leh. Koodhka sare waa dherer, qaro weyn, qalafsan oo toosan. Gaar ahaan wuu dheer yahay qaybta kore ee kuruubyada, garbaha iyo gadaalba waxyar baa loo laalaaban karaa. Xuubka iyo foodda, illaa khadka khayaaliga ah ee isku xidhaya dhegaha, dhegaha korkiisa iyo qaybaha hore ee lugaha iyo cagaha way gaaban tahay. Gaar ahaan wuxuu ku badan yahay qoorta (mane), cufan oo dheer dusha sare ee bowdooyinka (breeches). Waxay ku sameysmaa baalal dhinacyada hore. Eeyaha sida wanaagsan u dahaadhan sidoo kale waxay si gaar ah ugu badan yihiin gadaasha dambe ee baararka dambe. Dabada ayaa si qani ah loogu dahaadhay timo aad u dhaadheer. Koodhka jiilaalka waa mid dheer, aad u qaro weyn oo qaab dhogor wanaagsan leh. Timaha waa cufan yihiin waana cufan yihiin waana inaysan ku kala bixin dhabarka. Sida caadiga ah Tornjak waa midab midab leh oo leh calaamado midabbo adag oo kala duwan leh. Caadi ahaan midabka dhulka ugu badan waa cadaan. Waxaa jiri kara eeyo wata maro madow oo leh calaamado cadcad oo inta badan laga helo qoorta, madaxa iyo lugaha. Waxa kale oo jiri kara eeyo cadaan ah oo leh calaamado yar yar oo keliya.
Tornjak waxaa loo isticmaalaa dhaqashada iyo ilaalinta xoolaha eyga ilaaliyaha beeraha. Wuxuu leeyahay dabeecad deggan. Isagu waa saaxiibtinimo, deggan, geesi ah, adeecsan, caqli badan, sharaf iyo kalsooni ka buuxdo. Markuu shaqeynayo aad ayuu u ilaaliyaa hantida lagu aaminay, lama laaluusho oo wuxuu ka shakiyaa shisheeyaha. Wuxuu naftiisa ku ilaalin doonaa milkiilayaashiisa, lo'diisa iyo hantidiisa. Tornjak wuxuu saaxiib la yahay dad uu yaqaan. Wuxuu u heellan yahay sayidkiisa oo aad ayuu isugu dhafan yahay joogitaankiisa, wuxuu aad u jecel yahay dadka ku nool agagaarkiisa. Si dhakhso leh ayuu wax u bartaa waxna uma illaawin si fudud, si farxad leh ayuu u qabtaa hawlihii loo igmaday. Xoog leh oo adag, inta lagu jiro habeennada qaboobaha, eeyahaani waxay jiifaan dhulka oo badiyaa waxaa qariya baraf. Isagu wuu fududahay in la tababaro. Ujeedada tababarka eeygan waa inuu gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal khadadka hogaamiyaasha si cad ayaa loo qeexay. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta.
Miisaanka: Ragga 25 - 27 inji (65 - 70 cm) Dumarka 23 - 25 inji (60 - 65 cm)
Caano adag oo adag
Tornjak laguma talinayo nolosha guriga. Waxay ubaahanyihiin boos waxayna kufiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn. Sababtoo ah jaakaddiisa qaro weyn ayaa si fiican u ilaalisa, waxay si farxad leh ula qabsan kartaa ku noolaanshaha dibedda haddii ay leedahay hoy ku habboon.
Noocani eeygu wuxuu ku habboon yahay qoys leh boosas badan oo ku hareeraysan guriga. Waxay u baahan tahay in lagu qaado a socod maalinle ah .
Qiyaastii 12 ilaa 14 sano
Shanlo oo ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Shaambo way ka goyn kartaa jaakada saliida, astaamaha biyaha u adkeysta, marka isticmaal saabuun fudud. Noocani wuxuu daadiyaa laba jeer sanadkii.
Tornjak wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa aagagga Bosnia, Herzegovina iyo Croatia wuxuuna ku noolaa meelahaas kunkii sano ee la soo dhaafay. Tornjak waxaa lagu diiwaan galiyay magaca Kanis montanus oo u tarjumaya eeyga buuraha, laakiin dadka deegaanka ayaa u bixiyay magaca Tornjak (tor: xero adhi iyo lo '). Tornjak waxaa loo diiwaangeliyey inuu yahay nooc caan ah oo caan ah bishii Maajo 9, 1981 iyadoo loo yaqaan 'Bosnian-Herzegovinian sheepdog - Tornjak.' Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, Tornjak waxay u badan tahay inuu ku abtirsado Mastiff Tibetan ama halka uu ka yimid Iiraan maanta. Deegaanka wuxuu abuuray ey caafimaad qaba oo xoog leh, oo leh baahiyo dhexdhexaad ah oo xagga cuntada iyo hoyga ah, iyo ilaalo weyn.
meeqa culeys baa lagu sameeyaa
Giggle the Tornjak eey yar oo 7 bilood jir ah oo leh Pickle, qof weyn oo Tornjak ah oo 5 jir ah— Waxaan ugu magac darnay Pickle maxaa yeelay wuxuu ku dhashay Mt. Vlasic gudaha Bosnia. Iyagu waa laba ka mid ah oo keliya tiro yar oo ka mid ah Tornjaks-ka Mareykanka.
Soo qaado Tornjak sida eey
isku dhafka madow iyo tan
alaskan husky iyo pitbull mix
SUNTZU shih muqisho isku darka yorkie
eeyaha yar yar ee jarmalka macmalka ah